Nokia 1: Android Go nke ụlọ ọrụ ahụ rutere Spain | Gam akporosis
Firmlọ ọrụ Finnish Nokia, mgbe iwebata Nokia 1 oge gara aga, weta Spain a ọnụ ala gam akporo Go mbipụta, fechaa gam akporo sistemụ iji na-ala-ọgwụgwụ igwe na obere ngwaike ego.
Emeputara nke a n'oge na adighi anya, Anyị nwere ike inweta ya, na gọọmentị, site na weebụsaịtị ya yana site na ụlọ ahịa na azụmaahịa enyere ikike maka ọnụ ahịa akụ na ụba na nkwado nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote. Na mgbakwunye, anyị na-agwa gị nkọwa niile, nkọwapụta teknụzụ, yana njirimara ekwentị a. Nọgide na-agụ!
Cheta na e gosipụtara Nokia 1 na February 25 tinyere ngwaọrụ ndị ọzọ nke ika na Mobile World Congress gara aga nke mere n'obodo Barcelona.. Ndị Finnish mere ka amara ya dị ka igwe dị ike - agbanyeghị ịdị umeala n'obi ya na njedebe ya, nke nwere ntụkwasị obi ma nwee oke akụ na ụba nke nwere ike iburu ma mezuo ihe ọ kwere na nkwa maka ahụmịhe mmiri mmiri nke gam akporo Go na-enye anyị n'ihi ịdị mfe ya.
Nokia 1 bịara jiri ngosipụta IPS FWVGA IPH-4.5 nke nwere obere mkpebi, nke a Mediatek M6737M quad-core Cortex-A53 processor na 1.1GHz elekere elekere nke 64bits nke ihe owuwu ụlọ na 28nm nke ihe owuwu yana Mali-T720 MP2 dual-core 600MHz GPU. O nwere 1GB RAM, 8GB nke ebe nchekwa dị n’ime ya nwere ike ịgbasa site na kaadị microSD, ikike batrị 2.150mAh, nkwado SIM abụọ, yana O nwere igwefoto nwere megapixel 5 nke nwere Flash Flash, na 2MP ọzọ n’ihu ya.
N'aka nke ọzọ, Nokia 1 bụ IP52 gbaara iji chebe ya ka ọ ghara ịda mba, ma nwee ike ị nwere ike ịhazi ekele ya Xpress Na ụlọ.
Ọnụahịa na nnweta nke Nokia 1 na Spain
Nokia 1 sitere na obere ego nke euro 89, ọ bụ ezie na amabeghị mgbe Nokia ga-etinye ya n'ahịa na mba ahụ. Ihe doro anya bụ na ọ ga-abụ na ụbọchị ole na ole sochirinụ, na Anyị nwere ike ịzụta ya site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya, dịka anyị gosipụtara n'elu, yana site na ụlọ ahịa ndị isi ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 1: Android Go nke ụlọ ọrụ ahụ rutere Spain
Anyị edit akụkọ ihe mere eme nke ngwa anyị kpọrọ dị maka onye ọ bụla